Real Estate Listings: » Commercial Real Estate » Hotels » AU » Amachibi eCustomers Stafford aLupheleyo eKhathalweni Indawo yokuhlala - eChermside West - Qld1
Iimbonakalo: Secure Access
Amabala okuLondolozwa kweTricord Stafford ahlala abantu abakhulileyo kwindawo yokuhlala - eChermside West - QLDWELCOME TO STAFFORD LAKESTradfort Comforte baphucuka ngononophelo lwabadala kwikhaya lethu leStafford Lakes elihlala lanamhlanje, lixhonywa ziimpawu ezinokulindelwa kuphela kukuqonda. Ukunikezela ngeendlela ezahlukeneyo zenkathalo yokuthuthuzela kunye neendawo zokuhlala zehotele, iqela lethu labanikezeli babanonopheli bokwenyani nabo bazibophelele ekuqinisekiseni abahlali ukuba babe nenxaxheba kufudumele okufanayo nokuba zinjani na iimeko zabo. Samkela usapho kunye nabahlobo abatyelele abahlali, ukuba kube lula ukupaka izimahla zasimahla kunye nokufikelela okulula kwezithuthi zikawonkewonke. Indawo yethu yokuhlala inegama elidala lokugcina inkathalo yabantu abadala onokuyithemba. Relax, ukwazi izithandwa zakho zisezandleni ezilungileyo ne-TriCare.Isiqhelo, indawo yokuhlala enendawo yokuhlala, indawo yokuhlala kunye neenkonzo ezinomdla kwiindawo ezibanzi, ezibhedlele, e Westfield Chermside indawo yokuthenga kunye nase Stafford City precinct. Idityaniswe ne-Stafford Lakes Retirement Community, ezilungele izibini ezinendawo yokuhlala kunye nezidingo zokhathalelo. Indlela yethu yokunyamekela eStafford Lakes kukuqinisekisa ukuba abahlali bafumana amathuba eentsuku zemihla ngemihla zokuzibandakanya kwindawo enomtsalane kwaye baneendawo zabo zokuphumla ngokuzolileyo. ngelixa sinikezela ngononophelo olusemgangathweni kunye nokuhoywa ukuze kuhlangatyezwane neemfuno ezizodwa. Silungiselela onke amanqanaba okhathalelo, kubandakanya abahlali abaneemfuno zempilo ezintsonkothileyo, nabasebenzi abaqeqeshiweyo ngokupheleleyo kunye nezixhobo ezikhethekileyo. Ukuhonjiswa kwamakhaya kunye nempahla esemgangathweni kudala izinto ezijikeleze yonke indawo yokuhlala kwethu kule mihla kukhuthaza abahlali ukuba bazive besekhaya, ngelixa sinika indawo yokuhlala indawo yokuhlala. * Unonophelo lwendawo yokuhlala malunga nabahlali abayi-143, eyakhelwe ukubonelela iimfuno zabantu abadala baseOstreliya njengezabo Ukutshintsha kobomi * Indawo yokuhlala inegumbi lokuqala elinye, kunye neendawo ezinokunxibelelana kwigumbi lokuhlala * Amagumbi abahlali onke anomoya ngamnye okonwabela yena * Inkonzo yokuhlamba iimpahla * Ifowuni yongxamiseko nabahlengikazi ababhalisiweyo kwisiza se-24/7 * Ukufikelela kwi-physiotherapy, podiatry , Unyango olwahlukileyo kunye nolomsebenzi, unyango lokuthetha, i-GP kunye neenkonzo zokutya / ezokhemeskiIziganeko eStrafford Amachibi ahlala kuluntu oluhle, oluhlobo losapho apho impilo-ntle yethu iphambili kuthi. Iitshisi zethu ze-onsite zilungiselela ukhetho olubanzi lokutya okunesondlo, ukutya okumnandi imihla ngemihla, kunye namagumbi ethu okutyela aba ziindawo zokuhlala ngexesha lokutya. SineNkqubo ebanzi yenkqubo yokuphila ebandakanya abahlali ngelixa bephakathi koluntu lwethu, okanye betyelele kuluntu ngokubanzi. Iindawo zokuhlala zangaphakathi nangaphandle kwendawo yethu yokuhlala zisetyenziselwa imisitho ekhethekileyo, kwaye iilogo ezinje ngehotele zilungele ukudibana nosapho okanye izihlobo. Iintendelezo zealfresco ezikhuselekileyo zineendawo zokuhlala ezingaphandle okanye ezona zitaladi zangoku ngaphakathi ezibonisa iifestile eziphezulu, ezithandwayo kwezentlalo. okanye iintlanganiso zosapho * Ukulungisa iinwele * Iintshukumo zenkcubeko, iikhonsathi, iinkonzo zecawe, iiseshoni zonyango lokuzivocavoca * Iibhasi zasekuHlaleni ezinokuya kuluntu lwasekhaya kunye neklabhuUkubhalwa kwe-ID30657FEATURES * Ukufumana ukuSebenza okuKhuselekileyo * I-Community bus * Iinkonzo zoKhathalelo lobuqu * Ukukhathalela abantu abadala ngeXesha le-24 * Isidlo * Ukukhathalelwa kwabaDala abakumgangatho ophantsi
02 4963 xxxx Veza
Nxibelelana nentengiso 02 4963 xxxx